သီခငျြးဆိုနတေဲ့အဖိုးဖွဈသူလှငျမိုးကို သီခငျြးမဆိုနဲ့ ပွော ပွီး သူပဲအျောဆိုနတေဲ့ Liam လေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို တငျပေးလိုကျတဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုး – XB Media & News
အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ တဈခြိနျကအောငျမွငျမှုထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျခဲ့တဲ့အကယျဒမီမငျးသားကွီးလှငျမိုးကိုတော့ လူတိုငျးသိကွမယျ ထငျ ပါတယျနျော.. လှငျမိုးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေိုလညျး အောငျမွငျအောငျလုပျနိုငျပွီး
ခုခြိနျမှာတော့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတှနေဲ့ အောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျလို့ ပွောလို့ရနပေါပွီနျော… လှငျမိုးကတော့ အနုပညာမြိုးဆကျလေးဖွဈတဲ့ သမီးဖွဈသူ ယှနျးဝတီလှငျမိုး နဲ့အတူမွေးလေးဖွဈသူ Liam လေးကိုလညျး ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျအားပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော..
ယှနျးဝတီလှငျမိုးကတော့ လကျရှိမှာ ပွညျပနိုငျငံ တှငျ ပညာသငျကွားနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှု တှမှော ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ပူးပေါငျးပါဝငျခှငျ့ မရတဲ့အတှကျလညျး ဝမျးနညျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာ မှတဈဆငျ့အရေးကွီးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျ တှကေိုတော့ အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ ဝမြှေပေးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ပွညျပမှာနထေိုငျသူတှလေညျး မိသားစုဝငျတှကေို တှဖေို့ မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျလာလို့ မရနိုငျသေးတဲ့ အခွအေနရေောကျနေ ရပါတယျနျော။
ကြောငျးပွီးလို့ ပွနျလာရတော့မယျ့ အခြိနျမှာ စဈကောငျစီမှအာဏာသိမျးသှားတာကွောငျ့ ပွနျလာလို့ မရနိုငျသေးပဲ ဖွဈနရေပါ တယျနျော။ . ဒီနလေ့ေးမှာလညျး ” Liam လေးက ဂဈတာကိုဟနျပါပါနဲ့ ကိုငျတီးပွီး သီခငျြးဆိုဖို့ပွငျနတေဲ့ဗီဒီယိုလေးကို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော.. . ဖိုးဖိုးလှငျမိုးနဲ့လညျး သီခငျြးတဈပုဒျ ကိုပွိုငျတူ အျောဆိုနတေဲ့ ခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ Liam ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီး စာဖတျပရိသတျကွီးလညျခဈြပေးကွပါအုံးနျော…
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးလွင်မိုးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်.. လွင်မိုးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး
ခုချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရနေပါပြီနော်… လွ င် မိုးကတော့ အနုပညာမျိုးဆက်လေးဖြစ်တဲ့ သမီးဖြစ်သူ ယွန်းဝတီလွင်မိုး နဲ့အတူမြေးလေးဖြစ်သူ Liam လေးကိုလ ည်း ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ လက်ရှိမှာ ပြည်ပနိုင်ငံ တွင် ပညာသင်ကြားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဖြစ်ေ ပ်ါနေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် မရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှတစ်ဆင့်အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေကိုတော့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဝေမျှပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေလည်း မိသားစုဝင်တွေကို တွေ့ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေရောက်နေ ရပါတယ်နော်။
ကျောင်းပြီးလို့ ပြန်လာရတော့မယ့် အချိန်မှာ စစ်ကောင်စီမှအာဏာသိမ်းသွားတာကြောင့် ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေရပါ တယ်နော်။ . ဒီနေ့လေးမှာလည်း ” Liam လေးက ဂစ်တာကိုဟန်ပါပါနဲ့ ကိုင်တီးပြီး သီချင်းဆိုဖို့ပြင်ေ နတဲ့ဗီ ဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. . ဖိုးဖိုးလွင်မိုးနဲ့လည်း သီချင်းတစ်ပုဒ် ကိုပြိုင်တူ အော်ဆိုနေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ Liam ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးလည်ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…
ခဈြရတဲ့ညီမလေးနဲ့အတူ ထူးထူးခွားခွားလေးရိုကျကူး ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ပရိတျသတျကွီးအား ခပြွလာတဲ့ ပျေါရှာ